Andriantsimiavona Christian : olona tia mizara oksyzena sy manapariaka fahatsarana – Blaogin'i Voniary
Izy no nanangana ny tahala « Fanahy no olona ». Andriantsimiavona Christian no anarany, 50 taona izy ary mpitandro ny filaminana no asany. Mitrandraka manokana ny maha-Malagasy izy mba hahatongavana amin’ny fihavanana. Olona tia mizara oksyzena sy manapariaka fahatsarana ! Raha vao mitafa aminy ianao dia tsapanao fa olona miaina filaminana anaty izy. Araho ange e !
Andriantsimiavona Christian ao amin’ny tahala « Fanahy no olona » (sary indrana)
Voniary : Nanao ahoana ny fahazazanao, ny nitaizana anao ka nahatonga anao ho toy izao ?
Andriantsimiavona Christian : Tany amin’ny faha-11 taonako tany aho no nahatsiaro hoe mila zavatra itokiana eo amin’ny fiainana. Lahitokana manko aho ary ny mamako no nitaiza ahy. Tamin’izany aho no nahatsapa hoe sady zanak’i mama aho no dada ianteherany ihany koa. Teo no nahatonga ahy nanontany tena hoe iza na inona no mba hery iankinako. Izany no nahatonga ahy nirona tamin’ny haiady isan-karazany. Saingy mbola tanjona ara-batana ihany aloha tamin’izany dia ny ho lasa lavitra amin’ny fahaizana miady.
Tamin’ny 1984, nalaza be ny Kung Fu ary tamin’izany no nahafantarako voalohany teo amin’ny fiainako ny momba izany fierem-panahy izany. Lasa eritreritra ery ny tena rehefa nandinika hoe ahoana i « Grand maître » Pierre be mahavita manjavona, mivadika ho olona roa sy ny sisa. Teo aho no nanomboka te-handroso ara-panahy ary nitady porofo siantifika amin’ireny zava-panahy ireny. Ny nahafinaritra dia nanohana ahy foana i Neny tamin’ireny rehetra ireny.
Marina fa mpivavaka izahay, protestanta ny reniko saingy nisy hetaheta ara-panahy hafa lalandava tao anatiko. Ny zavatra tany am-piangonana manko toa ny zavatra efa fantatro ihany no naverimberina.
V : Nanao ahoana ny fomba niainana an’izany ?
CA : Rehefa nitombo taona teny aho dia nihaliana hatrany. Raha vao nisy olona fantatro hoe mahay io resaka fanahy io dia natoniko. Nitety Ashram maro teto Antananarivo aho tamin’izany. Ny Ashram moa dia toerana fanovozam-panahy amin’ny alalan’ny Yoga. Fa rehefa tsy voaporofo ara-tsiantifika ny ahy dia ialako !
Andriantsimiavona Christian manatanteraka fihetsika Yoga (sary indrana)
Tao Ambodivona, no tena nirobohako tanteraka satria nahitako zavatra maro toy ny Ata Yoga, fanandroana, « géomancie » sy « ésotérisme ». Ry dokotera Rakotonirainy, Rabearifeno, Ralaimazava, Tovo, ireny no nampianatra anay tao. Ary tao amin’ny trano koltoraly koa aho no tena nanovo fahalalana momba ny fanahy tamin’ny alalan’ny boky maro isan-karazany.
V : Afaka miaraka ve izay maha-olon’ny fanahy anao izay sy ilay asa maha-mpitandro ny filaminana anao ?
CA : Tamin’ny 1999 aho no niditra ho polisy. Ny antony dia noho ny fiheverako fa ny polisy dia olona tsara. Amiko, tsy fahalalana no mahatonga ny olona iray tsy tonga amin’ny fahatsarana ka izay no mahatonga ahy mitondra fampianarana ao amin’io sehatra iasako io toy ny ady amin’ny kolikoly. Anisany mitondra oksyzena manafoana sy manavaina io kolikoly io aho amin’izao fotoana izao.
Andriantsimiavona Christian mampiofanana ireo polisy (sary indrana)
Mety hoe mahery setra sy bontolo ny fandraisanao ny polisy. Inona moa no tsy mampitovy ny polisy amin’ny pasitera ? Ny polisy mampiasa hery mba hamaizana ny olona ka hiverenany amin’ny làlana tsara fa i pasitera kosa mitory teny. Noho ny hatsarana ao aminy no mahatonga ny polisy hanatanteraka izany fihetsika izany.
Ny zavatra katsahiko tao anatin’ireny fikarohana sy andrana samihafa nataoko ireny dia ny hananana toetra maha-olona : mifanaja, tony, milamina, mifandefitra ary mifamelona. Ka, mifameno amin’izany ny maha-polisy ahy fa tsy hoe zavatra miavaka.
V : Inona no voka-tsoa tsapanao teo amin’ny fiainanao ka tianao zaraina amin’ny olona?
CA : Anankiroa izao no zavatra tena voafehiko, izany hoe efa am-polotaonany maro no tsy nataoko : mangalatra ary miteny ratsy. Mitarika fahatoniana ato anatiko izany ary fahatokisan-tena sy fivelaran-tsaina. Anisan’izany izao ilay toe-tsaina voalazako teo. Mbola tsapako fa maro ny olona iva ara-panahy dia apetrako amin’ny antony tsy fahalalana no mahatonga izany fa tsy sokajiko mihitsy hoe ratsy ireny olona ireny.
V : Mba zarao aminay ny foto-kevitra na teny notsongaina entinao eo amin’ny fiainana
CA : Ao anatin’ny lasitra foto-pisainana ho vanona ao amin’ny « Fanahy no olona » izy ity : « hasina sy fihavanana, izay vao vola sy voninahitra ». Elatra roa mampanidina ny olombelona ireo. Ny ilany : hasina sy fihavanana, ho an’ny filaminana anaty ary ny ilany kosa : vola sy voninahitra ho an’ny fiadanana ivelany.
Petadrindrina ao amin’ny tahala « Fanahy no olona » (sary indrana)
Raha niteny i Jesoa hoe « ny fiadanako no omeko anareo », nahagaga ihany satria na izy ary tsy nanana variraiventy, na paosy aza tsy nananany. Tsy fantatra akory aza na mba nisolosolo akanjo izy iny ! Fa izany no misarika ny saintsika hoe ilay fiadanana, io lazainy io dia ao anaty, Ilay fanekana fa fanahy no olona. Izay no fototra !
V: Hafatra tianao ampitaina amin’ny mpamaky àry e !
CA: FANTARO FA SAROBIDY IANAO. Ny zanak’omby no tsy ampianarin-domano fa amin’ny olombelona kosa, ianarana avokoa ny zavatra rehetra satria sarobidy ny tena. Izay no antony nanagananay ilay tahala « Fanahy no olona », mba hisarihana ny olona ho liana amin’ny zavatra mahasoa ny tenany : ny vatany, ny fietseham-pony, ny sainy ary indrindra ny fanahiny.
Koa, manentana ny tsirairay hanandratra ny maha-Malagasy mba hampivoatra toetra mampisy fiombonana sy fifankatiavana. Tsy inona izany fa ny fanandratana ny fanahy maha-olona sy fiainana ny fanahy no olona.
ésotérisme gasy, fampivelarana ny maha-olona, fanahy no olona, fierem-panahy, maha-malagasy, ny fanahy no maha-olona, tahala fanahy no olona